Hee Mzalwana nguAvicii - Izinto Zobugcisa
Hee Mzalwana nguAvicii
Njengoko wenzile kowokuqala omnye ukusuka #INYANISO , ' Ndivuse , 'UAvicii uhambe nesandi seBluegrass kule ngoma, ephefumlelwe ngumculo ovela kumdlalo bhanyabhanya ka-2000 O Mzalwana, Uphi na?
U-Avicii wazama iimvumi ezintandathu ezahlukeneyo ngaphambi kokuba ahambe noDan Tyminski, owayelilizwi le-Soggy Bottom Boys evela O Mzalwana , kwaye bacula kweyona ngoma yabo ithandwayo kwifilimu ethi, Man Of Constant Sorrow. Ukuthetha ngesibheno seBluegrass kwi Amatye agiqekayo , U-Avicii uthe 'yayithembekile kwaye ilungile ngendlela yokuba imnandi kakhulu.'
U-Avicii wabhala oku kunye nomculi wengoma uDan Tyminski, kunye nabasebenzisana nabo rhoqo, abanye baseSweden uVincent Pontare noAsh Pournouri (okwangumphathi wakhe).
Ividiyo yomculo yengoma yayikhokelwe nguJesse Sternbaum kwaye yadutyulwa eBakersfield, eCalifornia. Iqhotyoshelweyo ibonisa abazalwana ababini abaselula abakhulela ngexesha lemfazwe eMelika; inkwenkwe endala idlalwe ngumntu omtsha uZach Voss, kunye nenkwenkwana nguJack Estes, oke wavela kuyo Usapho lwale mihla . U-Avicii ngokwakhe ubonakalisa i-cameo kwisiphelo sevidiyo.
Ingoma yayisetyenziselwa intengiso ye-TV ka-NJOY 'Abahlobo Abavumeli Abahlobo Batshaye' umkhankaso we-e-cigarette. Zimbini iindlela ezahlukeneyo zorhwebo - the Ushicilelo lwaseMelika lwentengiso ibonisa unomatse ekuqaleni ngelixa 'Inguqulelo yaseYurophu' iqala ngendoda ehamba ze.
UMlawuli uSternbaum uzame ukunyanzela umculi ukuba abe nexesha elingaphezulu kwesikrini, kodwa wala. Uye wazala zonke iingcebiso zomntu obhala iimpahla, kubandakanya nokulahla ikepusi yakhe yangasemva kunye neziteki zebhatyi ye-tweed kunye neebhutsi zeenkomo.
yintoni engahambi uleqa iingxangxasi kuthetha
Ndonwabile ukudibana nawe ngekhe uqikelele igama lam
Ndingathanda ukutshintsha umhlaba
Awundithandi njengokuba ndikuthanda
zithini izinyuko ezulwini
ukufunda ukubhabha iingoma ezincinci zam
ngoku ndiyabiwa bubuthongo and she is calling a cab